Ama-electrics angena emkhakheni wemoto kagesi | Ezezimali Zomnotho
Ama-elektrikhi angena emkhakheni wemoto kagesi
UJose recio | | izinkampani, Ibhizinisi
Okunye okusha izinkampani ezibalulwe ezimakethe zezimali zikazwelonke okukhombisa ukuthi sebengene emakethe evelayo yezimoto zikagesi. Isici esingabanikeza inani elengeziwe ekulinganisweni kwamanani abo, noma kunjalo esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside nangaphezulu kunasesikhathini esifushane. Ezinye zalezi zinkampani ezinqume ukuthi ziphume zibheke ezimotweni eziluhlaza yilezi U-Endesa no-Iberdrola, yize bengakalifaki leli qhinga emabhizinisini abo. Kunoma ikuphi, kuzoba yinto okufanele ibhekwe eminyakeni ezayo.
Izimoto zikagesi ziphoqelela onobuhle bazo emigwaqweni yaseSpain kancane kancane futhi ngaphandle kwenjabulo enkulu. Kuze kube seqophelweni lokuthi sekuvele kungaphezulu noma okujwayelekile hlangana nemoto yalezi zici ezikhethekile emadolobheni amakhulu ezwe lethu. Ngalo mqondo, kufanele sikhumbule ukuthi izimoto zikagesi sezivele zingokoqobo okumele kubhekwe kuzo ohambweni lwethu edolobheni. Ngaphezu kokunikeza usizo olusebenza kahle kakhulu lokulwa nokungcoliswa komhlaba ngokungabi yizimoto ezinolaka kangaka.
Ngalesi sikhathi, ukubhaliswa kwe- izimoto izimoto zikagesi (izimoto, ama-quadricycle, ezentengiso nezimboni izimoto namabhasi) eSpain zifinyelele kumthamo ongaphezulu kokungaphezulu Amayunithi ayi-1.000 XNUMX ngoJulayi, ngokuya ngemininingwane enikezwe yi-Spanish Association of Automobile and Truck Manufacturers. Lapho kukhonjiswa khona ukuthi kube nokwenyuka kulezi zindlela zokuhamba ezizimele ezingaphezu kuka-50% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Phakathi kukaJanuwari noJulayi walo nyaka, imakethe yaseSpain yezimoto ezihlanganisiwe yayimi amayunithi angama-45.395,
1 Izinkampani zamandla ezihlanganisiwe
2 Izimoto zikagesi zibiza kakhulu
3 Kufakwe amaphuzu angama-200 wokushaja
4 Ungalayisha kanjani?
5 Ubhekene nokwenyuka kwentengo kawoyela
6 Izaphulelo ekuthengeni
Izinkampani zamandla ezihlanganisiwe
Enye yezinkampani zakamuva ukujoyina lolu hlelo lokushayela yi-Endesa, ethathe isinqumo sokubheja kakhulu ezimotweni zikagesi njengefomula yokwengeza umugqa webhizinisi kulo mkhakha. Kuyo yonke iSpain, abasebenzi abangama-274 e-Endesa bajoyine i- Uhlelo Lokuhamba, emele cishe amaphesenti ayisikhombisa okuthengiswa kwayo yonke imakethe kazwelonke yezimoto ezihamba ngogesi. Ngakolunye uhlangothi, imikhumbi yalolu hlobo lwezimoto ezikhetheke kakhulu kulindeleke ukuthi ikhombise ukukhula okukhulu njengangonyaka ozayo. Into engathinta inzuzo yenkampani.
Kodwa-ke, uma okufunayo ukusebenzisa kakhulu le nqubo izinkampani zikagesi ezihamba kuyo, kuzoba kusenesikhathi ukuthi ibe ngokoqobo. Akumangalisi ukuthi izehlakalo zalezi zimoto ezibizwa ngemvelo zincane kakhulu e ama-akhawunti ebhizinisi kwalabo ababaliwe. Ngeke ube nokhetho ngaphandle kokulinda, okungenani eminye iminyaka embalwa, ukuze amanani abo akhombise lesi simo esiqala ukusethwa. Uma unesilinganiso esihle sokubekezela kusukela manje kuqhubeke, kungenzeka ukuthi eminyakeni emihlanu, eyisithupha noma eyisikhombisa uzothola umklomelo wakho uma ukhetha la manani ukwenza iphothifoliyo yakho elandelayo yokutshala imali.
Izimoto zikagesi zibiza kakhulu
Kusuka kwa-Endesa bayavuma ukuthi "ukuthola imoto kagesi kuyabiza kakhulu kunokuthenga imoto yomlilo, futhi ikakhulukazi uma ifakwe ibhethri le-lithium elenziwa ngesandla". Kepha ngasikhathi sinye bayaqaphela ukuthi imoto kagesi ikhiqiza ukonga okukhulu esikhathini esiphakathi nesikhathi eside, ngoba ngaphezu kokonga uphethiloli, izindleko zokulungisa kuncane kakhulu. Lokhu kungenxa ye- awekho amafutha noma izinto zokuthambisa, amabhuleki agqokile aphansi futhi ekugcineni azikho ukuhanjiswa kwemishini. Ngalokho, umphumela ephaketheni labashayeli uyashesha.
Ngalo mqondo, ukonga amandla kungasho isilinganiso se- 1,5 euros ngamakhilomitha ayi-100 ukuvuselelwa kabusha ebusuku nokusetshenziswa okumaphakathi kwama-15 kWh ngamakhilomitha ayi-100 njengesilinganiso sokukhomba. Ngakolunye uhlangothi, akunakulibaleka ukuthi kukhona izindleko zokuvikela ngenxa yokukhishwa kwe-CO2 emkhathini. Ngenkathi abashayeli balesi sigaba sezimoto njengamanje benezindlela ezahlukahlukene zosizo lomphakathi kanye noxhaso olufakiwe ezinhlelweni zokukhuthaza ukuhamba ngendlela esimeme.
Kufakwe amaphuzu angama-200 wokushaja
Enye inkampani enkulu kagesi, i-Iberdrola, nayo ibhekene nale nqubo efanayo yebhizinisi. Lapho iqembu lebhizinisi linqume ukubheja ku- ukuhamba okusimeme ngemoto yalezi zici. Okunye okunikelwe kakhulu kule modeli yokushayela ukuthi kuvumela ukwehliswa kwezithiyo zezomnotho nezokulawula. Esitatimendeni uveza ukuthi "umthethonqubo osuselwa kumgomo wokuthi" ongcolisayo uyakhokha "futhi wenza lula ukufakwa kwamaphoyinti okushaja kuyadingeka.
Ukuhlangabezana nalezi zinhloso, ikwazile ukufaka inethiwekhi kulo lonke elaseSpain lezindawo zokushaja ezingama-200 zezimoto zikagesi, ezaziwa ngokuthi amashaja kagesi. Lezi zixhumi zisatshalaliswa emigwaqweni emikhulu nasemaphasishi amakhulu ezwe ngenqubo enezigaba ezahlukahlukene ekusebenzeni kwayo futhi lokho kuzophela ezinyangeni zokugcina zika-2019. Elinye lamaphuzu afanele kakhulu walolu hlelo lokushaja olusha ukuthi luzohlukaniswa ngezindlela ezintathu maqondana nokusetshenziswa kwalo: okusheshayo, superfast futhi ultrafast. Ngokulinganiselwa kwesikhathi kuzozokhipha phakathi kwemizuzu engama-20 nengama-30.
Okunye okumele kubhekwe ngabashayeli bakulesi sigaba sezimoto kusukela manje kuzoba wukusebenza kokugcwalisa kabusha inethiwekhi kagesi. Yebo, abasebenzisi bazokwazi ukugcwalisa kabusha kulezi zikhungo zokusabalalisa ugesi, kodwa futhi benze i-geolocation, babhukhe futhi bakhokhe ngomakhalekhukhwini babo. Ngokusho kwemithombo evela ezinkampanini ezisemkhakheni kagesi, umthwalo olinganiselwe uzoba phakathi ama-euro amane nanhlanu njalo ngamakhilomitha ayi-100. Yize eminye imithombo ilinganisela ukuthi ingahle yehle eminyakeni ezayo ngenxa yokwamukelwa kwayo okukhulu phakathi kwabashayeli baseSpain.
Ngakolunye uhlangothi, kufanele kungakhohlwa ukuthi ukulinganiselwa kwalezi zinkampani ukuthi ngokuzayo kuzoba okungenani nephuzu elilodwa njalo kumakhilomitha ayi-100. Uma kunjalo, kuzosho ukwenza phinda inethiwekhi yamanje, yize kusazobonwa ukuthi lesi simo sizogcwaliseka yini eminyakeni ezayo. Ngoba ukufakwa kwalo ezweni lethu akukacaci, kuphambene nokwenzeka kwamanye amazwe ase-Europe, ikakhulukazi lawo asenyakatho yezwekazi elidala.
Ubhekene nokwenyuka kwentengo kawoyela
Kunokwehluka okuningana maqondana nezimoto ezinenjini yomlilo. Okukhethekile yikhona okuphathelene nokwenyuka kwentengo yegolide elimnyama. Ngalesi sikhathi, usefinyelele kubha ye- $ 80 umgqomo. Ngokulindelwe ukuthi ingaqhubeka nokukhuphuka, okungenani esikhathini esifushane naphakathi. Ngalo mqondo, izibikezelo ze-International Energy Agency (IEA) zigcwalisekile ngokwanele lapho zibona ukuthi ngo-2020 amanani azokhuphukela kuma-dollar angama-80 umphongolo ongahluziwe.
Intengo emaphakathi kaphethiloli eSpain isondelene kakhulu ne- 1,30 euro ngelitha. Ngalesi simo, akumangazi ukuthi kuzoba nenzuzo enkulu ukuthenga imoto kagesi kwezinye izindawo ngaphezu kwezinye. Lapho, eminye imibiko yemikhakha icacisa ukuthi ukonga ngezimoto ezisebenza ngogesi kungafinyelela cishe kuma-euro angama-9,5 kumakhilomitha ayi-100. Njengomphumela walezi zibalo, ukusetshenziswa okujwayelekile kwe-13 kW ngehora ohambweni lwamakhilomitha ayi-100, kungasho izindleko ezilinganisiwe ezisondele kakhulu kuma-euro ama-2, uma kuqhathaniswa nobuncane bama-euro ayisithupha ahlinzekwa yilezi zimoto ezikhethekile ububanzi.
Enye inzuzo enikezwa yizimoto zikagesi izindleko zabo eziphansi uma kuqhathaniswa nezimoto zomlilo. Leli qiniso lithathwa ngoba ingxenye enhle yomasipala baseSpain bacabanga ngochungechunge lwezibonelelo noma amabhonasi ngokutholwa kwalo. Kwamanye amacala nge kufika kuma-75% kuzintela zakho. Ngenkathi ngakolunye uhlangothi, kukhona nezinye izinzuzo ezingeziwe, njengokukhululwa okuphelele ekubhaliseni. Mayelana ne-VAT, icishe ifane naleyo yezimoto ezijwayelekile. Ngakho-ke, kuzoba yisinqumo okufanele usenze ngokuya ngokunye kokuhlukahluka.
Okunye okuzobhekwa yilokho okususelwa emapaki ezimoto avela kulesi sigaba sezimoto. Kuze kube seqophelweni lokuthi bandile kancane kancane baya ezindaweni ezisemadolobheni, ezitolo ezinkulu kanye nasezindaweni zabavakashi. Futhi okubaluleke kakhulu, esigabeni sokunweba seminyaka embalwa ezayo.
Okokugcina, kufanele kwaziwe ukuthi kunezindawo ezijwayelekile zokushaja kabusha emigwaqeni emikhulu ukuze abashayeli bakwazi ukwenza le nqubo ihlale kahle ngokwengeziwe. Yize le ngxenye isesigabeni sokunweba, okungenani maqondana nezwe lethu. Futhi nezinye izikhungo zokugcwalisa kabusha ezenzelwe bonke abasebenzisi futhi ezivuselele lo mkhakha. Futhi okubaluleke kakhulu, esigabeni sokunweba seminyaka embalwa ezayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ibhizinisi » Ama-elektrikhi angena emkhakheni wemoto kagesi
Izinga lenzalo lithinta kanjani?
Ungatshala kuphi ukhisimuzi ononile?